मनोरञ्जन Archives - Page4of7- Dna Nepal
नेपाल : माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा १५ सय ३३ प्रतिनिधि सहभागी हुने
अर्थ/विकास : सुनको मुल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो
Breaking News : वनलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग सहित वन महासंघ आन्दोलित
शिक्षा : अन्नपूर्णका विद्यार्थीलाई प्याराडिसो स्पोर्टस् बारले दियो नयाँ कपडा र शैक्षिक सामग्री
प्रमुख समाचार : पोखराका विश्वास एमफिल तहमा देशकै उत्कृष्ट
समाज : वर्ल्डलिंकले पोखराका अनलाईनलाई निशुल्क इन्टरनेट दिने
Breaking News : गण्डकीका मुख्यमन्त्री कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित
राजनीति : पोखरा महानगरको सभापतिमा मोहन बास्तोलाको उम्मेदवारी
Breaking News : फुट्यो एमाले, नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता
Breaking News : एनआरएनएको नेतृत्वमा थापाको दावेदारी
दिशा पटानीको विकिनी तस्बिरले हंगामा ९ मंसिर २०७५, आईतवार १०:१८
एजेन्सी, मंसिर ९ । बलिउडमा नायिका दिशा पटानीको फिगरको चर्चा सधै हुन्छ । अहिले त पटानीको चर्चा चलचित्रमा पनि छ । ‘एम एस धोनी’ नामक चलचित्रबाट बलिउडमा पाइला राखेकी दिशाले चलचित्र ‘बागी २’मा अभिनय गरेपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । झनै, उनी र नायक..
मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा मिस वर्ल्डकाे टप फोरमा (भिडियो सहित) ५ मंसिर २०७५, बुधबार १४:१४
काठमाण्डौं, मंसिर ५ । मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा चीनमा हुन लागेको मिस वल्र्ड २०१८ को टप प्रबल दाबेदारको सुचिमा परेकी छिन् । एउटा युट्युव च्यानलले तयार पारेको मिस वल्र्ड २०१८ का प्रबल दाबेदार सुन्दरीहरुको सूचीमा नेपालकी श्रृंखला खतिवडा चौथो..
नेपालकी मेनुका पौडेल सारेगमपको शीर्ष १३ मा, प्रिटी जिन्टाले गरिन् तारिफ ३ मंसिर २०७५, सोमबार ०५:२०
पोखरा, मंसिर ३ । नेपाली चेली मेनुका पौडेल भारतीय रियालिटी शो सारेगमपको शीर्ष १३ मा पुगेकी छिन् । मेनुकाले जि टिभीबाट प्रशारण भइरहेको आइतबारको शोमा फिल्म खुबसुरतको ‘पिया बाबरी’ बोलको गीत गाउँदा जजहरु उठेर उनको हौसला बढाएका थिए । उनको..
दक्षिण कोरियामा छक्का पञ्जा ३ २८ कार्तिक २०७५, बुधबार १४:४९
पोखरा, कार्तिक २८ । सर्बाधिक रुचाईएको नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा ३ दक्षिण कोरियामा पनि देखाईने भएको छ । नेपाल गोरखा परिवार, दक्षिण कोरियाले नोभेम्बर २५ तारिखमा आन्सान र डिसेम्बर २ तारिखमा दुङ्देमुन सहर मा चलचित्रको प्रदर्शन गर्न लागेको हो । सो..
पोखरामा हिन्दी गीतको सुटिङ (भिडियो हेर्नुस्) २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०१:५९
पोखरा, कार्तिक २७ । अन्तरदेशीय प्रेम सम्बन्धको कथा प्रस्तुत गरिएको नेपाली फिल्म ‘प्रेमलीला’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । पोखराका मनोरम स्थानमा छायांकन गरिएको ‘जाने क्या हुवा ए’ बोलको हिन्दी भर्सनको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । नायिका दिपशिखा..
पोखरा फिल्म सोसाईटीमा जितेश २६ कार्तिक २०७५, सोमबार ०२:३८
पोखरा, कार्तिक २६ । पोखरा फिल्म सोसाइटीमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिबार कास्कीको पर्यटकीय स्थल धम्पुसमा भएको साधरण सभाले जितेश प्रधानको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । आगामी २ बर्षे कार्यकालको लागि गठन गरिएको उक्त..
विपी स्मृति भवन बनाउन भुर्जुङखोलामा गुञ्जिए कर्ण दास १९ कार्तिक २०७५, सोमबार ०२:५३
पोखरा, कार्तिक १९ । ‘आफ्ना लागि होईन देशका लागि बाँचेर हेर मुटुभरी नेपालको माया साँचेर हेर’ कर्ण दासको स्वर निस्किने वित्तिकै भुर्जुङखोला दर्शकको हुटिङले केहीबेर सुसायो । विवेक मल्लले लेखेका देशभक्तिमा समर्पित यो गीतमा कर्णले नै संगीत..
हामी चार बर्षदेखि प्रेममा थियौं–दीपिका १३ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०६:२३
चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’ले हलमा बम्पर कारोबार गरिरहेको समयमा यो चलचित्रकी नायिका दीपिका प्रसाईंले निर्देशक दिवाकर भट्टराईसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन् । आखिर, दिवाकरसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी दीपिकालाई उनको के कुरा मन र्पयो ? उनीहरुको प्रेम..
भारतीय शोमा नेपालकी मेनुकाको चौतर्फी प्रशंसा, जजले भने ‘मुल्याकंन गर्ने हाम्रो औकात छैन’ (भिडियो सहित) ७ कार्तिक २०७५, बुधबार ०२:२७
एजेन्सी, कार्तिक ७ । नेपाली रियालिटी शो नेपाल आइडलमार्फत सबै नेपालीको मन जितेकी गायिका मेनुका पौडेलको सुमधुर आवाजलाई आज पनि बिर्सन सकिन्न । नेपाल आइडलबाट अनपेक्षित रुपमा बाहिरीएकी उनले त्यसपछि पनि आफनो सांगीतिक प्रस्तुतिलाई रोकिनन् ।..
जाँडरक्सीको पैसा आयोजकले नतिर्दा कलाकार सोनिका र शोभितको घिनलाग्दो हर्कत ! २३ आश्विन २०७५, मंगलवार १४:०२
पोखरा, असोज २३ । तनहुँमा एक पछि अर्को महोत्सव हुँदैछ । शुक्लागण्डकी ५ बेलचौतारामा गत शुक्रबारदेखि प्रथम लायन्स महोत्सव शुरु भइसकेको छ । लायन्स क्लब अफ शुक्लागण्डकी टाउनको आयोजनामा सञ्चालित महोत्सव असोज २७ गतेसम्म चल्नेछ । लगत्तै तीनखोले देवी..
सुनको मुल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो
पोखरा, पुस ७ । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु. ४०० ले घटेर ९२ हजार ६०० तोकिएको छ । सुन अघिल्लो दिन प्रतितोला ९३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले.....
वनलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग सहित वन महासंघ आन्दोलित
पोखरा, पुस ७ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा.....
पोखराका विश्वास एमफिल तहमा देशकै उत्कृष्ट
पोखरा, पुस ७ । पोखराका विश्वास राज पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एम फिल तहमा सर्वोत्कृष्ट भएका छन् ।.....
फुट्यो एमाले, नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता
पोखरा, भदौ २ । लामो समयदेखि आन्तरिक द्धन्द्धमा रहेको नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित भएको छ । बुधबार बरिष्ठ नेता.....
एनआरएनएको नेतृत्वमा थापाको दावेदारी
पोखरा, साउन ३१ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय अध्यक्षमा रविना थापाले दावेदारी प्रश्तुत गरेकी छिन्.....